Lamborghini Aventador LP700-4, mhlawumbe, angabizwa ngokuthi ingenye yezemidlalo izimoto best of iqembu isiNtaliyane, ekhishwe ngekhulu xxi. Yonke imininingwane mayelana lo mshini unesithakazelo. Kuzoqalwa nge isihloko. Lesi sikhangiso wawuthi Aventador - inkunzi abadumile, umuntu odumile yezimpi zokuchitheka kwegazi okukhulu kunakho e Zaragoza, okuyiwona wathola umklomelo ohlonishwa ngoba Gallantry enkundleni. Nokho, nesithakazelo lobuchwepheshe imininingwane ephathelene ngokuqondile imodeli okuningi.
Munye walemisebenti enkulu abadali imodeli Lamborghini LP700-4 Aventador, kwaba nokwehla isisindo imoto esiphansi ngangokunokwenzeka. Futhi wakwazi ukufeza umgomo - konke sibonga ukuthi lisetshenziswe ukukhiqizwa kwe-carbon fiber. Isisindo iphethini 1 575 kg, futhi lokhu, uma eqhathaniswa esasisandulele Murcielago, at 147 kg kancane. Umzimba sekulula nje kuphela, kodwa futhi kunamandla - by kakhulu ngendlela 70%.
On the design kungaba naye isikhathi eside, kodwa kungcono esisodwa sibheke. Photo elinikezwe ngenhla.
Kodwa kusekuningi Lamborghini Aventador LP700-4 illalah. Umehluko omkhulu phakathi kwaso futhi imodeli sokuqala iphrofayli eziyingqayizivele engxenyeni engenhla. Design edonsela abaqinisekisiwe ephelele imigqa weJiyomethri. ophahleni lokuxhuma ehlanganisa izingxenye ezimbili exhunywe kwi-hood. Wenziwe carbon fibre. Uphahla engasindi, kodwa aqinile, iyunithi kwegazi futhi afakwe ebhuthini. Nokho, kubalulekile ukususa ngesandla bese ufake efanayo. Ubunzima kulokhu, akukho cha, kodwa iqiniso lokuthi imodeli kuwufanele eziyinkulungwane 750 zamadola, futhi akukho umsebenzi othomathikhi, basambatheka.
ngokushesha Lamborghini LP700-4 Aventador yabakhanga abathengi ezingaba khona. Hhayi kuphela ngenxa yokuba ukubukeka. Kwakulapho Onjiniyela leli qembu lokuqala asetshenziswa isimiso "ukuqala / stop", ngenxa okuyinto kungenzeka ukuba kabusha injini e 0.18 ngemva kwemizuzwana eyeka.
Futhi esinye isici - uhlelo CDS. It ikhubaza eyodwa umugqa amasilinda, uma umthwalo lincane kakhulu futhi ngesilinganiso ngezansi 130 km / h.
Ngaphansi hood Lamborghini LP700-4 Aventador setha 700-amahhashi 6.5-litre ilungiselelo V emise amasilinda 12. Ubizwa eliqhutshwa gearbox 7-speed.
Ngokuthakazelisayo, iyunithi le imodeli ulula by kakhulu ngendlela 235 khilogremu, kuneyokuqala Murcielago. Futhi degree of kokucindezelwa kuba ephakeme.
Inalidi umshini wokubonisa izinga lejubane ifinyelela ku-100 km / h ngemizuzwana engu engaphansi kwemithathu. Ubuningi kuze kufinyelele lapho Ingasheshisa imoto 350 km / h. Futhi yebo, Lamborghini LP700-4 Aventador - wheel drive imoto. Ngaleso 43% of torque adluliselwa amasondo phambi. Futhi konke okunye - at the ezingemuva. Kodwa emva kwesikhathi esithile, uma kunesidingo, 60% adluliselwa amasondo phambi. Ngokuthakazelisayo, ikhilomitha lokuqala ngemuva kokuqala "Aventador" Onqobayo kancane kuka imizuzwana 19.
By the way, ngemva kwesikhathi esithile 4SV imodeli wadedelwa. Empeleni - okufanayo "Aventador". aduduze kuphela uvele isihloko, kanti injini ukhiqiza akuyona 700, futhi 900 "amahhashi". izingcezu 10 kuphela zavezwa imishini enjalo.
Lamborghini Aventador LP700-4, intengo okuyinto ngisho kunalokho enkulu, ezahlukene besigaxa enamandla. ABS, ESP, ama-airbag (phambili lobani), air conditioning, ukulawula isimo sezulu, amandla ayo, ne-trip computer, i-cruise control - lena nje uhlu encane yini e imodeli. Kufanele kuqashelwe ukunakwa yokubakhona izinguquko at kwesondo ezemidlalo ayo, ezemidlalo izihlalo nge izilungiselelo, izibuko kagesi evuthayo, kabili Xenon izibani, CZ, immobiliser Car audio kanye uhlelo umsindo, Hi-Fi - kule imoto inawo konke okudingayo. A sekugcineni - kuphela eliphezulu isikhumba carbon fibre. Ngisho encane umthwalo gumbi ivolumu 110 amalitha. Nokho, kusukela kuba imoto ezemidlalo, le khava kungaba okwanele. isikhwama Amancane travel ukubeka ngempela iphumelele.
Ngakho, ukuthi eyisisekelo, odinga ukukwazi ngalesi imodeli Lamborghini ukukhathazeka. Okunethezeka, ashukumisayo, Aventador isimanga. Uma ukholwa ukuthi leli ke lezi izimoto emhlabeni lingaphansi kuka 3700 amakhophi.
Pickups "Chevrolet": ububanzi
Kanjani sketchbooks ngezandla zakhe? kanjani sketchbooks zokuphetha?
Balonevye ibhulukwe - izingubo ephelele nenkathi ebandayo